U cusbooneysii Adobe Premirere 'Dhoofinta Degdega ah' | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Premiere ayaa lagu cusbooneysiiyay 'Dhoofinta Degdega ah' ee cusbooneysiinta Nofeembar
Una casriyeyn xiiso leh ayaa timid maanta Adobe Premiere oo leh 'Dhoofinta Degdega ah' bishaan Nofeembar; Iyo sida Adobe uu ugu sameynayay cusbooneysi bille ah wax ka badan warar muhiim ah.
Iyo in ka badan wakhti markii fiidiyowga ayaa si aad ah u dalbanaya dadka isticmaala iyo xirfadlayaasha dhammaan heerarka si aad uga hesho waxyaabahaas tayada leh kuwa raacsan. Marka laga reebo 'Dhoofinta Degdega ah' waxaad sidoo kale ku kalsoon tahay waxqabadka la hagaajiyay ee AMD APUs iyo kordhinta taageerada luqadda ee Premiere Rush.
Laga soo bilaabo maalinta aad maanta waxay la timid cusbooneysiinta Adobe Premiere oo leh dhoofinta deg degga ah (labo bilood ka hor waxaan helnay tan cusub) iyo taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si dhakhso leh oo waxtar leh u shaqeyno adoo siinaya marin toos ah goobaha dhoofinta ee ugu caansan uguna badan ee la isticmaalo.
Waxaan ula jeedaa, waan ogahay dooran kartaa wax soo saar tayo sare leh H.264 iyadoo la raacayo xarfaha xarfaha ama toos u aad liiska halkaas oo aan ku leenahay dhowr horudhac ah. Ujeeddadu waxay tahay inaan sii wadi karno yareynta cabirka feylka annaga oo aan luminaynin iota tayo leh, laakiin had iyo jeer leh waxtarka ugu sarreeya waqtiga si aannan ilbiriqsi ugu lumin shaqadan.
Marka laga reebo muuqaalkan cusub ee muhiimka ah ee Premiere, lagu cusboonaysiiyay ku-hagaajinta AMD APUs taasina waxay horseed u noqotaa hagaajinta xawaaraha wax bixinta illaa 4 jeer ka dhakhso badan. Waxaan sidoo kale ogaaneynaa jilicsanaanta 4K oo si fiican u adeegsaneysa xusuusta.
Haddii aan tagno Premiere Rush, thumbnails ayaa lagu darayaa raad kasta oo maqal ah iyo taageerida luqadaha cusub sida Dutch, Polish, Swedish, Turkish iyo Chinese dhaqameed.
Una taxane ah oo wararka la xiriira Adobe Premiere qaabkeeda desktop iyo Rush-ka mobilada hagaajiya qulqulka shaqada ee sameynta fiidiyowyada noocyadooda kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Adobe Premiere ayaa lagu cusbooneysiiyay 'Dhoofinta Degdega ah' ee cusbooneysiinta Nofeembar
Tifatirayaasha sawirada bilaashka ah ee kombiyuutarkaaga